Takian’ny Makedoniana Mpanao Hetsi-panoherana Ny Hialan’Ireo Mpitsara Avo Momba ny Lalàmpanorenana “Voaloto” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2016 7:40 GMT
“Andao arovana amin'ny Fitsaran-dalampanorenana ny Lalàmpanorenana! Miala ô!” Sary avy amin'i Vancho Dzhambaski (CC BY-NC-SA), tamin'ny rakitsarin'ny “Taratasy fifirana manoloana ny Fitsaran-Dalampanorenana.”
Olom-pirenena Makedoniana an-jatony maro no nanao fihetsiketsehana teo anoloan'ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana ao Skopje tamin'ny 29 Febroary, mitaky ireo mpitsara manohana ny fanapaha-kevitra hanome famotsoran-keloka ireo heloka bevava ambony indrindra, toy ny halabatom-pifidianana, ny fametavetana ankizy ary ny fampihorohoroana hiala amin'ny asany.
Tsy tafiditra tamin'ny famelan-keloky ny filoha ireo heloka bevava ireo hatramin'ny taona 2009, saingy vao haingana ny fitsarana no nanaiky hitarika fotoana hihainoana ny mety hanesorana ireo fameperana ireo.
Anisan'ireo andiany nokarakarain'ny sehatry ny olom-pirenena Aide teo ambanin'ny teny filamatra “Andeha hiaro ny Lalàmpanorenana avy amin'ny Fitsaran-Dalàmpanorenana!” ny fihetsiketsehana. Tsy tahaka ireo fihetsiketsehana teo aloha fa notontosaina nandritra ny andro fiasana ity hetsika iray ity. Nihirahira ny hiaka hoe “Miala,” “Tsy misy fandriampahalemana raha tsy misy rariny”, “Jiolahy” ary “Fanjakan'Antoko” ireo mpanao fihetsiketsehana ary nilanja sora-baventy mivaky hoe “mpanompon'ny mpamono olona!” Iray tamin'ireo antsoantso mahery indrindra ny “fitsarana voaloto”, kilalaon-teny amin'ny fiteny Makedoniana, satria misy ny fitoviana manjavozavo amin'ny teny hoe “lalàmpanorenana” sy ny teny ilazana ny fanjakana voaloton'ny diky.
Nanondro sy nanome tsiny ireo mpitsara dimy amin'ny enina izay nankatò ny fandinihana ny fanapaha-kevitra ny mpanao fihetsiketsehana, fanapaha-kevitra tonga tamin'ny fotoana nangalana am-bavany an'ireo manampahefana Makedoniana noho izy ireo voalaza fa nanao hosoka tamin'ny fifidianana tamin'ny 2013 mba hiantohana ny fandresen'ny antokon'ny fitondrana VMRO-DPMNE. Voalaza fa manana fifandraisana manokana amin'ny VMRO-DPMNE izy dimy: Jovan Josifovski, Vladimir Stojanovski, Vangelina Markudova, Elena Gosheva ary Nikola Ivanovski ary nolazain'ny mpanao fihetsiketsehana fa nanana heriny tamin'ny handinihana ny fanovana natolotra ho amin'ny famotsoran-keloka io antoko io. Afaka mitaredretra am-bolana maromaro na an-taonany maro mihitsy aza ny fitsarana amin'ny toe-javatra sasany vao manaiky handinika izany. Tamin'ity indray mitoraka ity kosa anefa dia 19 andro monja no nandrasana dia noheverina izany.
Nanaraka ny ohatra nataon'i Vlatko Vasilj, izay nisioka ny sarin'izy dimy ny maro hafa tao amin'ny media sosialy.
Jamba ny Rariny [fitsarana], saingy manana tava ny tsy rariny. Tsy iray ihany, fa dimy amin'izy ireo!
Nisioka ny fiantraikany lavidavitra kokoa amin'ny fanapaha-kevitra i Andreja Stojkovski ilay manam-pahaizana momba ny fidirana amin'ny Vondrona Eoropeana:
Mamono ny Demaokrasia any amin'ny fakany ny famotsoran-keloka amin'ny halabatom-pifidianana! Mandra-pahoviana no hanafoanany ny tenany?
Na dia marobe aza ireo mpiasan'ny haino aman-jery naka horonantsary ny hetsi-panoherana miaraka amin'ny fakantsary ampolony, fantsona fahitalavitra sy gazety vitsy ihany no nitatitra ny hetsika. Niditra tao amin'ny media sosialy ny mpanao fihetsiketsehana mba hanao fanentanana ho solon'izany. Nilaza ny sasany fa nameno ny Twitter ny resaben'ny mpanohana ny governemanta miafina amin'ny retsiokan’ (retwet) ny Oscar atao fialamboly, ary niantso ireo mpitsikera tsy mihetsika hanatevin-daharana ny ezaka manohitra ny fitsarana.
Andreja Stojkovski kosa nisioka ny sariny miaraka amin'i Gjorgje Marijanovikj, mpampianatra lalàna efa misotro ronono sy iray amin'ireo lohalaharan'ny demokrasia ao Makedonia ankehitriny ary nanatevin-daharana ny hetsi-panoherana ihany koa.
Ireharehako ny diplaomako noho izy. Nihaona taminy teo anoloan'ny Fitsaran-Dalàmpannorenana aho androany, tonga hanao famelabelarana izy
Polisy miaro ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana amin'ny olom-pirenena milamina. Averiko ny hoe OLOM-PIRENENA. MILAMINA
Mangeto-panerena amin'ny fitsarana hitakiana amin'ny mpitsara tsy hamela heloka ireo mpanao heloka bevava ny olom-pirenena? Eny indrindra, fanerena henjana dia henjana hampanajana ny lalàna izany!
Fialàna! Manohitra aho!
Mahaliana tanteraka ny mampita ireo sioka adala mandritra ny hetsi-panoherana. Okay, ianareo “tsy mitanila”, OK! Manao fihetsiketsehana aho!
Nandefa taratasy misy ny fitakian'izy ireo tany amin'ny fitsarana ny delegasiona vitsivitsy tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana rehefa navela namaky ny fefy (tady) napetraky ny polisy. Avy eo nanipy horonana taratasy fidiovana teo ambonin'ny lohan'ny polisy, manoloana ny fidirana ao amin'ny fitsarana ny sasany tamin'ireo andian'olona.
Taratasy fifirana manidina mankany amin'ny fitsarana!
Miantsoantso ny vahoaka: “Fitsarana voaloto, fitsarana voaloto!”*
Nanao kabary ireo mpandray anjara marobe sasany tamin'ny hetsi-panoherana, anisan'izany i Žarko Trajanoski, manam-pahaizan'ny zon'olombelona, i Petrit Saracini mpanao gazety ary ireo mpikatroka avy amin'ny faritra samihafa ao amin'ny firenena, tahaka an'i Aleksandar Dojranliev avy ao Gevgelija sy Vladimir Hristovski avy ao Veles.
Namaky tononkalo manesoeso “Haody hoan'ny Amperora Nikolay” ilay mpilalao sarimihetsika Simona Atanasova (tononkalo manondro ny Praiminisitra taloha, Nikola Gruevski, izay niala tamin'ny asany vao haingana noho ny fifanarahana hampitsaharana ny krizy politika nateraky ny fanambarana fa nihaino tsy ara-dalàna ireo olona an'arivony ny fitondram-panjakana ), tononkalo nosoratan’ ilay mpanoratra tantara tsangana Jugoslav Petrovski, miafara amin'ny teny filamatra anti-fasista “No pasaran!” ( “Tsy ho afaka izy ireo !”)
Raha nifantoka indrindra amin'ny mety ho famotsoran-keloka amin'ny hosoka ara-pifidianana ny mpanao fihetsiketsehana, dia nandefa fanairana mikasika ireo heloka hafa mety hahazo famotsoran-keloka ihany koa ny firaisamonim-pirenena. Ohatra, nilaza i Dragi Zmijanac, filohan'ny Megjashi, ONG miaro ny zon'ny ankizy fa ny fanapahan-kevitra hanome famotsoran-keloka ireo mpametaveta ankizy sy ny mpanolana dia samy “manafintohina sy fahadalàna.”
Taorian'ny hetsi-panoherana, nitatitra ny sasany tamin'ireo mpandray anjara fa niharan'ny endrika herisetra isan-karazany nataon'ireo mpiambina tsy miankina tao an-toerana izay nokaramain'ny fitsarana izy ireo. Nilaza kosa ny sasany fa nahazo hafatra fandrahonana tamin'ny aterineto. Nilaza i Vladimir Hristovski rehefa avy namoaka ny lahatsary nalainy tao amin'ny fihetsiketsehana fa naharay antso an-tariby avy amin'ny nomerao tsy fantatra ary nandrahona azy sy ny reniny ilay mpiantso ary nahazo hafatra sora-tànana “fampitandremana farany” tao am-baravarana ihany koa izy. Nilaza ihany koa izy fa nisy olona nandefa antso ho “famonoana” azy tao amin'ny vondrona Facebook vidy sy varotra izay ahitana mpikambana maherin'ny 130.000.
“Fampitandremana farany ho anareo ity alohan'ny handraisana KARATRA MENA!” Fanamarihana voarain'ilay mpikatroka Vladimir Hristovski taorian'ny fihetsiketsehana, nosoratana tamin'ny tenim-paritry ny tanàna nahaterahany tao Veles.
Ajde! mampanantena ireo mpikatroka fa hanohy ny fihetsiketsehana mandra-pivaly ny fitakian'izy ireo. Kasaina hatao amin'ny Asabotsy 5 Martsa ny fihetsiketsehana manaraka.
07 Jolay 2020Montenegro
22 Jona 2020Eoropa Andrefana